Wasiirka Hawlaha Guud oo Awaamiir Cusub Ku Soo Rogay Dhulka Danta Guud ee Dawladda | Baligubadlemedia.com
Wasiirka Hawlaha Guud oo Awaamiir Cusub Ku Soo Rogay Dhulka Danta Guud ee Dawladda
Wasiirka hawlaha guud dhulka iyo guryeynta somaliland Cabdirashiid Ducaale “Qambi” ayaa shaaciyey inaanay jiri doonin dhul iyo guri dambe oo ay dawladu leedahay oo cid gaar ahi iibinaysaa.
Wasiir Qambi waxa qiray inay jiraan
dhul ama hanti dawladu lahayd oo la iibiyay, oo waxaanu tusaale ugu soo qaatay hangarada sariibada Inji oo gacanta dawladda ka maqan oo qaybo kamid ah la iibiyay, isla markaasina uu sheegay inay dedaal ugu jiraan sidii loogu soo celin lahaa dhulkaasi gacanta dawladda. “kuwo la iibiyay way jiraan.
Kuwo dad la siiyay oo dadkii la siiyay ay iibiyeen baa jira oo Berbera ayaa ka mid ah, Hargeysana way jiraan oo waa bakhaarada suuqa Inji iyo ADC isugu jira, qaarkood waa la iibshay oo gacanta dawladda waa ka baxeen. Ayuu yidhi wasiir Qambi, waxaanu intaasi ku daray “laakiin wixii kale ee hadhay ama kiro haloogu jiro ama sifo kaleba haloo isticmaalee, imika wixii ka dambeeyay dhici mayso in guri dawladeed cid la siiyo, cid dambena meel dawladdu leedahay lagu bixinayn arrin kale oo xaga dawladda ka yimid.” Ayuu yidhi wasiir qambi.